China Uqweqwe oluqinile lwefektri nabakhiqizi | Kingtai
Uma uke wafundela ukwenza izikhonkwane zakho zoqweqwe lwawo, cishe uhlangabezane namagama athi “koqweqwe lwawo oluqinile” kanye “noqweqwe oluthambile.” Ngicabanga ukuthi abantu abaningi banombuzo ofanayo: Uyini umehluko phakathi kwakho kokubili? umehluko phakathi koqweqwe lwawo oluqinile noqweqwe lwawo oluthambile ukuthungwa komkhiqizo oqediwe.Izikhonkwane zoqweqwe oluqinile zibushelelezi futhi zibushelelezi, zinomfanekiso omuhle wombala. Ingaphezulu alinawaya, kanti unqenqema lwensimbi lwezikhonkwane ezithambile zoqweqwe lwawo luyi-convex.Zombili izindlela zisebenzisa isikhunta sensimbi esifanayo, futhi zombili zinemibala egqamile futhi egqamile.Kodwa kunezinketho ezithile ezikhethekile eziqondene ngqo noqweqwe oluthambile.
Uwukhetha Nini Uqweqwe Oluqinile Izikhonkwane zoqweqwe lwazo oluqinile zihlala ziqinile futhi azikwazi nokuklwebheka uma ziqhathaniswa noqweqwe lwazo oluthambile. Abantu abaningi bakhetha koqweqwe lwawo oluqinile phezu koqweqwe lwawo oluthambile ngenxa yokubukeka okuhlanzekile nokuphelile. Imiklamo eminingi ingasebenza kokubili koqweqwe lwawo oluqinile futhi oluthambile, ngakho-ke isikhathi esiningi sifika ekuthandweni komuntu siqu. Izikhonkwane zoqweqwe oluqinile ziqala zigcwaliswe ngombala, bese ubuso bephini bugaywe phansi ukuze bube sicaba futhi bushelelezi. Ukugaya nokupholishwa kubenza bangahambisani nokuqedwa kwensimbi ethile. Uma ufuna insimbi evamile yegolide noma isiliva, khona-ke koqweqwe lwawo oluqinile lungase lube yisinqumo esihle kumklamo wakho.
Izikhonkwane zoqweqwe oluqinile zihlala isikhathi eside futhi zimelana nokuklwebheka kunezikhonkwane ezithambile zoqweqwe lwawo.
Abantu abaningi bakhetha koqweqwe lwawo oluqinile phezu koqweqwe lwawo oluthambile ngenxa yokubukeka kwayo okuhlanzekile nokukhanyayo.
Imiklamo eminingi iyatholakala kokubili koqweqwe lwawo oluqinile futhi oluthambile, ngakho-ke isikhathi esiningi kuncike ekuthandweni komuntu siqu.
Iphinikhodi yoqweqwe oluqinile iqala ngombala futhi ingaphezulu lephini libushelelezi.
Ukugaya nokupholisha kubenza bangahambisani nezindawo ezithile zensimbi.
Uma ufuna insimbi evamile yegolide noma isiliva, i-koqweqwe lwawo oluqinile luyisinqumo esihle somklamo wakho.
Ngoqweqwe oluqinile, i-koqweqwe lwawo luyengezwa ngaphambi kokuba i-plating yengezwe, i-koqweqwe lwawo luyengezwa futhi luphuculwe flat ezingeni elifanayo nemigqa yokufa yensimbi. Umbala ngamunye kufanele ubhakwe kuhhavini ngamunye ngamunye okwengeza inqubo kanye nezindleko. Uma yonke imibala seyengeziwe ibheji lingafakwa ugesi bese lipholishwa futhi ukuze kuqedelwe ibheji. Inqubo eminingi yokupholisha yingakho ibheji likwazi ukuzuza imininingwane emincane kancane kunoqweqwe lwazo oluthambile nokuthi kungani eminye imigqa yensimbi ingase isabalale ekukhiqizweni futhi ibe mkhulu kunomklamo wasekuqaleni. Inqubo yethu yoqweqwe oluqinile iyinqubo yesimanje yenqubo yendabuko yoqweqwe oluqinile futhi umehluko omkhulu phakathi koqweqwe lwawo oluqinile uqweqwe lwangempela.
Ukuze uthole koqweqwe lwawo oluqinile, engeza uqweqwe lwawo ngaphambi kwe-electroplating bese upholisha endizeni efanayo nolayini wensimbi.Umbala ngamunye kufanele ubhakwe ngamunye ngamunye kuhhavini, ngenjongo yokuphishekela ikhwalithi ephakeme kodwa yanda inqubo yokukhiqiza kanye nezindleko.Uma yonke imibala isiphelile. yengezwe, bese ibheji ingacwecwa futhi ipholishwe futhi ukuze kuqedelwe ibheji. Kuthathe ukupholishwa okuningi ukuze ibheji ikwazi ukuthola imininingwane emincane kancane kunoqweqwe oluthambile, nokuthi kungani olunye lwezintambo lungasatshalaliswa ekukhiqizeni futhi lube lukhulu kunoqweqwe oluthambile. umklamo wangempela.Inqubo yethu yoqweqwe oluqinile iyinqubo yesimanje, umehluko omkhulu phakathi kwenqubo yoqweqwe oluqinile lwendabuko kanye noqweqwe lwethu oluqinile luwuqweqwe lwangempela.
Okwedlule: Khanyisa Izikhonkwane Zelebula Elimnyama
Olandelayo: Iphinikhodi ye-Lapel ene-Hinged